भर्खरै विबाहित दु लहीले जे ह र्कत गरे थाहा पाउँने सं सारका सबै च कित ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/भर्खरै विबाहित दु लहीले जे ह र्कत गरे थाहा पाउँने सं सारका सबै च कित !
हठनीका रामकिशनको परिवारमा ६ छोरा र १ छोरी छन् । यी मध्ये दुई छोरा रमेश उर्फ ​​भूरा र नाहर सिंहको नोभेम्बरमा बरेली (यूपी) निवासी सीमा र शिवानीसँग एसटीसी आवास बोर्ड भरतपुरमा विवाह भएको थियो । बरेलीका निवासी सन्तोष उर्फ ​​पप्पू बिचौलियाका रुपमा परिचित थिए । सम्पूर्ण परिवारले विवाहको लागि २ लाख रूपैयाँ खर्च गरे । उनका परिवारले कथित दुल्हन र उनका परिवारलाई ट्याक्सीबाट भरतपुर आउँन जानको लागि भनेर १० हजार पनि खर्च गरेका थिए । दुबै दुलहा दिल्लीको एक कारखानामा काम गर्छन्, भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस